Luka Asɛmpa 8:1-56
Mmea bi a na wɔka Yesu ho (1-3)
Ogufo ho mfatoho no (4-8)
Nea enti a Yesu yɛɛ mfatoho (9, 10)
Ogufo ho mfatoho no nkyerɛkyerɛmu (11-15)
Ɛnsɛ sɛ wɔkata kanea so (16-18)
Yesu maame ne ne nua mmarima (19-21)
Yesu maa mframa yɛɛ dinn (22-25)
Yesu maa ahonhommɔne kɔhyɛɛ mprako mu (26-39)
Yairo babea; ɔbea bi de ne nsa kaa Yesu atade nguguso (40-56)
8 Eyi akyi bere tiaa bi no, otutuu akwan kɔɔ nkurow mu ne nkuraa ase kɔkaa asɛm no, na ɔkaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa.+ Ná Dumien no ka ne ho, 2 ɛne mmea bi a na wasa wɔn yare, ne wɔn a na watu ahonhommɔne afi wɔn so. Saa mmea yi ne: Maria a wɔfrɛ no Magdalene, nea ahonhommɔne ason fii ne mu puei no, 3 ɛne Yoana,+ Herode fi so panyin Kusa yere no, ne Susana ne mmea foforo pii a na wɔde wɔn ahode resom wɔn no.+ 4 Afei nnipadɔm kɛse bi bɛkaa wɔn a wɔne no kokɔɔ nkurow nkurow so no ho, na ɔde mfatoho bi kasa kyerɛɛ wɔn sɛ:+ 5 “Ogufo bi kɔe sɛ ɔrekogu n’aba. Bere a ɔregu aba no, ebi koguu kwankyɛn maa nkurɔfo tiatiaa so, na ewim nnomaa bedii.+ 6 Ebi koguu ɔbotan so, na efifii, nanso esiane sɛ annya nsu nti, ewui.+ 7 Ebi koguu nsɔe mu, na nsɔe no ne no nyinii, na emiaa no.+ 8 Na ebi nso koguu asaase pa mu. Bere a efifii no, ɛsow aba mmɔho 100.”+ Bere a ɔkaa eyinom no, ɔmaa ne nne so kae sɛ: “Ma nea ɔwɔ aso a ɔde betie no ntie.”+ 9 Na n’asuafo no bisaa no nea mfatoho yi kyerɛ.+ 10 Ɔkae sɛ: “Mo na wɔde ama mo sɛ monte Onyankopɔn Ahenni ho ahintasɛm kronkron no ase, na wɔn a aka no de, mfatoho na wɔde ka kyerɛ wɔn.+ Enti wɔbɛhwɛ de, nanso wɔbɛhwɛ no kwa, na wɔbɛte de, nanso wɔrente ase.+ 11 Afei nea mfatoho no kyerɛ ni: Aba no ne Onyankopɔn asɛm.+ 12 Nea ekoguu kwankyɛn no ne wɔn a wɔte asɛm no, nanso Ɔbonsam ba beyi asɛm no fi wɔn koma mu, na wɔannye anni annya nkwa.+ 13 Nea ekoguu ɔbotan so no ne wɔn a wɔte asɛm no a wɔde anigye gye tom, nanso eyinom nni ntini. Wogye di, nanso ɛnkyɛ; edu sɔhwɛ bere a, na wɔagyae.+ 14 Nea ekoguu nsɔe mu no, eyinom ne wɔn a wɔte asɛm no, nanso asetena yi mu dadwen ne ahonyade+ ne anigye+ twetwe wɔn, na emia wɔn koraa ma enti aba a wɔsow no ntumi nnyin nwie.+ 15 Na nea ekoguu asaase pa mu no de, eyinom ne wɔn a wɔde koma pa+ a emu tew tie asɛm no, na wɔde sie wɔn koma mu, na wɔde animia sow aba.+ 16 “Obiara nni hɔ a ɔsɔ kanea a, ɔde ade kata so anaasɛ ɔde si mpa ase, na mmom ɔde si kaneadua so, na ama wɔn a wɔba dan no mu no ahu hann+ no. 17 Na biribiara nni hɔ a ahintaw a ɛrenna adi, na biribiara nni hɔ a wɔde asie fee a ɛrempue na ɛremma petee mu.+ 18 Enti monhwɛ sɛnea mutie asɛm yiye; na obiara a ɔwɔ ntease no, Onyankopɔn bɛma no bi aka ho,+ na nea onni ntease no de, ntease kakra a osusuw sɛ ɔwɔ no mpo, Onyankopɔn begye afi ne nsam.”+ 19 Afei Yesu maame ne ne nua mmarima+ baa ne nkyɛn, nanso nnipadɔm+ no nti, wɔantumi annu baabi a ɔwɔ no. 20 Na nkurɔfo kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo maame ne wo nua mmarima gyina abɔnten, na wɔpɛ sɛ wohu wo.” 21 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Me maame ne me nua mmarima ne eyinom a wɔte Onyankopɔn asɛm na wodi so no.”+ 22 Da bi, ɔne n’asuafo no kɔtenaa ɔkorow bi mu, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma yentwa nkɔ ɔtare no agya.” Enti wosiim kɔe.+ 23 Na bere a wɔwɔ nsu no so no, ɔdae. Ɛnna mframa kɛse bi bɔ faa ɔtare no so, na nsu fii ase bu faa wɔn korow no so maa anka wɔreyɛ amem.+ 24 Enti wokonyan no, na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, Ɔkyerɛkyerɛfo, yɛrebewuwu!” Ɛnna ɔsɔree, na ɔteɛteɛɛ mframa no ne nsu a ɛrebu fa so no, na ano brɛɛ ase, na ɛyɛɛ dinn.+ 25 Afei obisaa wɔn sɛ: “Mo gyidi wɔ he?” Nanso ehu kaa wɔn, na wɔn ho dwiriw wɔn, na wobisaa wɔn ho sɛ: “Hena koraa ni? Otumi hyɛ mframa ne nsu mpo ma wotie no.”+ 26 Na wɔde ɔkorow no koduu mpoano wɔ Gerasafo asaase so,+ baabi a ɛne Galilea di nhwɛanim, na wogyinae. 27 Bere a Yesu sii fam no, ɔbarima bi a ofi kurom hɔ a ahonhommɔne wɔ no so behyiaa no. Ná ɔhyɛɛ ataade akyɛ paa, na na ɔnte fie, mmom, na ɔte amusiei.*+ 28 Bere a ohuu Yesu no, ɔteɛɛm, na ɔkotow n’anim. Afei ɔde nne kɛse kae sɛ: “Dɛn na me ne wo wɔ yɛ, Yesu, Ɔsorosoroni Nyankopɔn no Ba? Mesrɛ wo, nhaw me.”+ 29 (Ná Yesu aka akyerɛ honhom fĩ no sɛ omfi ɔbarima no mu. Ná honhom no taa kɔhyɛ ɔbarima no mu,+ na na wɔtaa de nkɔnsɔnkɔnsɔn gu ne nsa ne ne nan, na wɔwɛn no. Nanso na ɔtetew nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu, na na honhommɔne no twe no kɔ baabi a obiara nni.) 30 Yesu bisaa no sɛ: “Wo din de dɛn?” Ɔkae sɛ: “Asafodɔm,” efisɛ na ahonhommɔne pii hyɛ ne mu. 31 Na wɔsrɛɛ no ara sɛ ɔnnhyɛ wɔn mmma wommfi ne mu nnkɔ amoa donkudonku no mu.+ 32 Saa bere no, ná mprako pii+ wɔ bepɔw no so a wɔredidi. Enti wɔpaa no kyɛw sɛ ɔmma wɔn kwan mma wɔnkɔhyɛ mprako no mu. Na ɔmaa wɔn kwan.+ 33 Enti ahonhommɔne no pue fii ɔbarima no mu, na wokowurawuraa mprako no mu, na mprako no de mmirika fii bepɔw no so koguu ɔtare no mu, na wowuwui. 34 Bere a wɔn a wɔhwɛ mmoa no huu nea asi no, woguan kɔbɔɔ amanneɛ wɔ kurow no mu ne ne nkuraase. 35 Ɛnna nkurɔfo bae sɛ wɔrebɛhwɛ nea asi. Na wɔbaa Yesu nkyɛn behuu ɔbarima a ahonhommɔne afi ne mu no sɛ ɔhyɛ ataade te Yesu nan ase a n’adwenem da hɔ, na ehu kaa wɔn. 36 Na wɔn a wohuu nea esii no kaa nea ɛyɛe a ɔbarima a ɔwɔ ahonhommɔne no ho tɔɔ no no kyerɛɛ nkurɔfo no. 37 Enti nnipadɔm a wofi Gerasafo nsaase a ɛbemmɛn hɔ no so no ka kyerɛɛ Yesu sɛ omfi wɔn nkyɛn nkɔ, efisɛ na ehu kɛse aka wɔn. Ɛnna ɔtenaa ɔkorow no mu siim sɛ ɔrekɔ. 38 Na ɔbarima a ahonhommɔne fii ne mu no kɔɔ so srɛɛ Yesu sɛ ɔne no bɛkɔ, nanso ɔmaa ɔbarima no sanee, na ɔka kyerɛɛ no sɛ:+ 39 “San kɔ fie, na kɔ so ka nea Onyankopɔn ayɛ ama wo.” Enti ofii hɔ kɔe, na ɔkaa nea Yesu ayɛ ama no no wɔ kurow no mu nyinaa. 40 Bere a Yesu san bae no, nnipadɔm no gyee no fɛw so, efisɛ na wɔn nyinaa rehwɛ no kwan.+ 41 Na hwɛ! ɔbarima bi a ne din de Yairo a ɔyɛ hyiadan mu panyin bae. Na ɔkotow Yesu nan ase, na ofii ase srɛɛ no sɛ ɔmmra ne fi,+ 42 efisɛ na ne babea baako pɛ* a wadi bɛyɛ mfe 12 reyɛ awu. Bere a Yesu rekɔ no, nnipadɔm no kyeree no so. 43 Ná ɔbea bi wɔ hɔ a mogya atu no+ mfe 12, na na obiara ntumi nsaa no yare.+ 44 Ɔbea no faa Yesu akyi de ne nsa bɛkaa n’ataade nguguso ano,+ na amonom hɔ ara, mogya no twae. 45 Enti Yesu bisae sɛ: “Hena na ɔde ne nsa kaa me?” Obiara kae sɛ ɛnyɛ ɔno a. Ɛnna Petro kae sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, nnipadɔm yi afum wo ho,* na wɔakyere wo so.”+ 46 Nanso Yesu kae sɛ: “Obi de ne nsa aka me; mahu sɛ tumi+ afi me mu kɔ.” 47 Bere a ɔbea no hui sɛ Yesu ahu no no, ɔde ahopopo bɛkotow n’anim. Na ɔkaa nea enti a ɔde ne nsa kaa no, ɛne sɛnea ne ho tɔɔ no amonom hɔ ara no wɔ nnipa no nyinaa anim. 48 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbabea, wo gyidi ama wo ho atɔ wo. Fa asomdwoe kɔ.”+ 49 Na Yesu gu so rekasa no, hyiadan mu panyin no nanmusini bi bɛkae sɛ: “Wo babea no awu; nhaw Ɔkyerɛkyerɛfo no bio.”+ 50 Bere a Yesu tee no, ɔka kyerɛɛ Yairo sɛ: “Nsuro. Wo de, nya gyidi, na wo babea no benya nkwa.”+ 51 Bere a oduu fie hɔ no, wamma obiara ne no anwura hɔ gye Petro ne Yohane ne Yakobo ne abeawa no papa ne ne maame. 52 Nanso na nkurɔfo resu abeawa no, na na wɔde awerɛhow repempem wɔn koko. Enti ɔkae sɛ: “Munnyae su,+ onwui na mmom wada.”+ 53 Ɔkaa saa no, wofii ase serew no, efisɛ na wonim sɛ wawu. 54 Ɛnna osoo abeawa no nsa, na ɔkae sɛ: “Abeawa, sɔre!”+ 55 Na nkwa*+ san baa ne mu, na ntɛm ara ɔsɔree.+ Na Yesu kae sɛ wɔmma abeawa no biribi nni. 56 Na n’awofo ani gye boroo so, nanso Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔnnka nea asi no nnkyerɛ obiara.+
^ Anaa “nnipadɔm yi atwa wo ho ahyia.”
^ Anaa “ne honhom.”